ခိုးမှု – Eleven Media Group
အင်းစိန်မြို့နယ်နှင့် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တို့တွင် လှည့်လည်၍ ခိုးမှု ၁၇ မှုအထိ ကျူးလွန်ခဲ့သည့်အဖွဲ့အား ဖမ်းဆီးရမိ
Posted on August 24, 2018 August 25, 2018 by သန့်ဇင်ကျော်
အင်းစိန်မြို့နယ်နှင့် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တို့အတွင်း လှည့်လည်၍ ခိုးမှု ၁၇ မှုအထိ ကျူးလွန်ခဲ့သော အဖွဲ့အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သြဂုတ် ၂၄ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူများမှာ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သည့် သူရအောင်၊ ပြည့်ဖြိုးကျော်၊ ဇင်မင်းသူနှင့် ရန်နိုင်ထွန်းဆိုသူတို့ ဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့လေးဦးကို အင်းစိန်မြို့နယ်၊ တညင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ ပြင်စည်မင်းသားကြီးလမ်းပေါ်တွင် သြဂုတ် ၁၄ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲခန့်က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“သူတို့က ခိုးမှုပြစ်ချက်ဟောင်းရှိလို့ မသင်္ကာလို့ စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဆေးတော့ သူတို့ဆီမှာ ဖုန်းတစ်လုံးတွေ့တယ်။ အဲဒီဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးတော့ ခိုးယူခဲ့တယ်လို့ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ ပေါ်ပေါက်သဖြင့် ၎င်းတို့လေးဦးအား အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်းက (ပ)၁၅၉၇/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၉/၅၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး အခြားပြစ်မှုများ ရှိ မရှိ ဆက်လက် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ဆေးရာ ၎င်းတို့လေးဦးသည် မေ၊ ဇွန်နှင့် ဇူလိုင်လများအတွင်းက အင်းစိန်မြို့ နယ် (၁၄) လမ်းဆုံအနီး ရပ်ထားသည့် ယာဉ် နှစ်စီးပေါ်မှ ဖုန်းလေးလုံးကိုလည်းကောင်း၊ တညင်းကုန်းဈေးရှိ သင်္ဘောသီးရုံအတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံးကိုလည်းကောင်း ခိုးယူခဲ့သည်ဟု စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ၎င်းတို့လေးဦးသည် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၃)၊ ပုလဲလမ်းပေါ် တွင် ရပ်တန့်ထားသည့် ကုန်တင်ယာဉ်ပေါ်မှ ဖုန်းနှစ်လုံးနှင့် Bluetooth Box တစ်ခုတို့ ကိုလည်းကောင်း၊ တစ်ပါကွေ့ မှတ်တိုင်အနီး ရပ်တန့်ထားသည့် ယာဉ်ပေါ်မှ ဖုန်းနှစ်လုံးကိုလည်းကောင်း၊ တစ်ပါကွေ့ယာဉ်ကြီးများထားရှိရာ ခြံဝင်းအတွင်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်ပေါ်မှ ဖုန်းတစ်လုံး၊ ဆောက်လုပ်ရေးတဲအတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံး၊ ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံးကိုလည်းကောင်း၊ ဧည့်ရိပ်သာတစ်ခုအနီးရှိ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံး၊ (၁/၃၆) ရပ် ကွက်၊ ပြည်-န၀ဒေးလမ်းအနီးရှိ ဂိုဒေါင်နှင့် နေအိမ်အတွင်းမှ ဖုန်းနှစ်လုံး၊ မိကျောင်းအိုင် ရွာအတွင်းရှိနေအိမ်များထဲမှ ဖုန်းနှစ်လုံး၊ ရွှေဗဟိုပတ်လမ်းရှိ ဆောက်လက်စတိုက်တစ်တိုက်အတွင်းမှ ဖုန်းနှစ်လုံး၊ နေမျိုးအနော်ရထာလမ်းရှိ ကင်းတဲတစ်တဲပေါ်မှ ဖုန်းတစ်လုံးကိုလည်းကောင်း ခိုးယူခဲ့သည်ဟု စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ပေါ်ပေါက်ချက်များအရ ၎င်းတို့လေးဦးအား သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းများတွင် အမှုများအသီးသီးရေးဖွင့်ကာ အရေးယူရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged ခိုးမှုLeaveaComment on အင်းစိန်မြို့နယ်နှင့် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တို့တွင် လှည့်လည်၍ ခိုးမှု ၁၇ မှုအထိ ကျူးလွန်ခဲ့သည့်အဖွဲ့အား ဖမ်းဆီးရမိ
ဗားကရာ ဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားသော ရေယာဉ်များပေါ်မှ ဖုန်းများ လိုက်လံ ခိုးယူသူများကို ဖမ်းဆီးရမိ
Posted on July 12, 2018 by မျိုးထက်ပိုင်
ရန်ကုန်မြို့ ဗားကရာ ဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားသော ရေယာဉ်များပေါ်မှ ဖုန်းများ လိုက်လံခိုးယူသူများကို ဇူလိုင် ၈ ရက်က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇူလိုင် ၈ ရက် နံနက် ၈ နာရီကျော်က ဗားကရာဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားသော ရေယာဉ်များပေါ်သို့ လှေငယ်တစ်စင်းဖြင့် လူလေးဦးက တက်ရောက် ခိုးယူနေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းရရှိသဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ရာ နံနက် ၄ နာရီခွဲတွင် ဗားကရာဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိပြီး လူလေးဦး လိုက်ပါလာသည့် လှေငယ်တစ်စင်းမှာ မောင်းနှင် ထွက်ပြေးသောကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးရန် ခေါ်ယူသော်လည်း လာရောက်ခြင်းမရှိဘဲ ထွက်ပြေးသဖြင့် လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ ကြည့်မြင်တိုင် ဗဟိုစံပြငါးဈေးရှေ့ ရေပြင်သို့ အရောက်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မသင်္ကာဖွယ် လူလေးဦးနှင့် လှေငယ်အား ခေါ်ယူစစ်ဆေးရာ Huawei တံဆိပ်ပါ Y-610 ဖုန်းတစ်လုံးနှင့် Mi တံဆိပ်ပါ Note4ဖုန်းတစ်လုံးကို ဗားကရာဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားသော သုခ၀တီ ၄ ဆန်တင် ကုန်လှေပေါ်မှ ခိုးယူလာကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သဖြင့် ဆက်လက် ရှာဖွေရာ အလျား ၂၂ ပေ၊ အနံ ၈ ပေ ၉ လက်မခန့်ရှိ အမည်းရောင် သစ်သားလှေ တစ်စင်း၊ Honda တံဆိပ်ပါ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နှင့် တွဲတပ်ထားသော ၀င်ရိုးပန်ကာ တစ်စုံ၊ Huawei တံဆိပ်ပါ Y-610 အမျိုးအစား အနက်ရောင် ဖုန်းတစ်လုံး၊ MI တံဆိပ်ပါ Note4အမျိုးအစား ငွေရောင်ဖုန်း တစ်လုံး၊ သစ်သားလေးခွ တစ်လက်၊ ဖန်ဂေါ်လီ လောက်စလုံး လေးလုံး၊ ၁၄ လက်မခန့်ရှိ သံရိုးတပ် တူတစ်ချောင်းတို့ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးရရှိသော အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
အမှုမှ မသင်္ကာသူ လေးဦးအား ဆိပ်ကမ်းမြို့မရဲစခန်းသို့ အပ်နှံအမှုဖွင့်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းအရ သိရသည်။
Posted in Crime, NewsTagged ခိုးမှုLeaveaComment on ဗားကရာ ဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ်ထားသော ရေယာဉ်များပေါ်မှ ဖုန်းများ လိုက်လံ ခိုးယူသူများကို ဖမ်းဆီးရမိ
လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း လှည့်လည်၍ ခိုးမှု ၁၆ မှုအထိ ကျူးလွန်ထားသည့်အဖွဲ့ကို ဖမ်းဆီးရမိ
လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း လှည့်လည်၍ ခိုးမှု ၁၆ မှုထိ ကျူးလွန်ထားသောအဖွဲ့အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ဧပြီ ၂၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ စုံစမ်းသိရသည်။
“သူတို့အဖွဲ့က ခိုးမှုတွေ ကျူးလွန်ထားတယ်လို့ သတင်းရလို့ဖမ်းဆီးပြီး စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ အားလုံးငါးယောက်။ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ထဲကို လှည့်ပြီး ဖုန်းတွေလိုက်ခိုးနေတာ။ ခုသက်ဆိုင်တဲ့စခန်းမှာ အမှုတွေဖွင့်ပြီး အရေးယူထားတယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူငါးဦးမှာ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် မင်းသူရကျော်၊ ပြည့်စုံထွန်း၊ ကျော်ဇေယျ၊ သက်ပိုင်ထွန်း၊ ရဲရင့်မင်းဦး ဆိုသူတို့ဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့ငါးဦးကို ဧပြီ ၂၁ ရက် ညနေပိုင်းတွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း၌ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးပြီး စစ်ဆေးရာ ၎င်းတို့သည် သက်ပိုင်စိုး၊ ပြည့်ပြည့်ဆိုသူတိုနှင့်အတူ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ မဟာဆွေလမ်းဘေးရှိ အဆောင်တစ်ဆောင်အတွင်းမှ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးကိုလည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့ငါးဦးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်နှင့် စက်တင်ဘာလများအတွင်းက လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ ချင်းတွင်းလမ်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်အတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံး၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊ ပညာပတ်လမ်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်အတွင်းမှ ဖုန်းနှစ်လုံး၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ မဟာဆွေလမ်းဘေးရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်အတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံး၊ မဟာဆွေ (၈) လမ်းဘေးရှိ မုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကိုလည်းကောင်း ခိုးယူခဲ့သည်ဟု စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ၎င်းတို့ငါးဦးသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်နှင့် စက်တင်ဘာလများအတွင်းကပင် လှိုင်သာယာမြို့နယ် အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ ချင်းတွင်း (၃) လမ်းဘေးရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်အတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံး၊ သီရိဇေယျာလမ်းဘေးရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်အတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံး၊ မဟာဆွေ (၅) လမ်းဘေးရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်အတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံး၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းဘေးရှိ ဖုန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွင်းမှ ဖုန်းနှင့် ငွေဖြည့်ကတ်များ၊ အဆိုပါလမ်းရှိ ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံး၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်၊ သီရိဇေယျာလမ်းဘေးရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်အတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံး၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ ချင်းတွင်းလမ်းဘေးရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်အတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံး၊ မဟာဆွေ (၆) လမ်းဘေးရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်အတွင်းမှ ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကိုလည်းကောင်း ခိုးယူခဲ့သည်ဟု စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged ခိုးမှု, လှိုင်သာယာLeaveaComment on လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်း လှည့်လည်၍ ခိုးမှု ၁၆ မှုအထိ ကျူးလွန်ထားသည့်အဖွဲ့ကို ဖမ်းဆီးရမိ
ထားဝယ်မြို့ အနောက်ရွှေဘုံသာ ဖောင်တော်သီ (မောလဲ) စေတီတော်၌ ထိုင်တော်မူ ရုပ်ပွားတော်ခုနစ်ဆူ ပျောက်ဆုံးမှုဖြစ်ပွား
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်မြို့ ဥဿရံရပ်ကွက်ရှိ အနောက်ရွှေဘုံသာ ဖောင်တော်သီ (မောလဲ) စေတီတော်၌ မတ် ၁၆ ရက်က စေတီတော်ဝင်းအတွင်း ပူဇော်ထားသော ပွင့်ရာဗောဓိမှ ထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော် ခုနစ်ဆူ ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
မတ် ၁၆ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်က ရုပ်ပွားတော် အလှူရှင်ဖြစ်သူက ယင်းစေတီတော် ၀င်းအနောက်ဘက်တွင် ပူဇော်ထားသည့် ပွင့်ရာဗောဓိထိုင်တော်မူ ရုပ်ပွားတော်များကို ရေသွန်းလောင်းရန် ရောက်ရှိလာစဉ် အောက်ခံပလ္လင်ပါ ဥာဏ်တော် ၁၈ လက်မခန့်ရှိ စကျင်ကျောက်ဖြင့်ထုလုပ်ထားသော ထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော် ခုနစ်ဆူနှင့်အတူ ကပ်လှူပူဇော်ထားသော မီးစကြာများပါ ပျောက်ဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့နောက် စေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့ထံ အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး နောက် ညနေ ၆ နာရီကျော်ခန့်တွင် ထားဝယ် မြို့မရဲစခန်းသို့ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“ဘုရားဆင်းတုတော်တွေပျောက်တာကို မွန်းလွဲ ၂ နာရီလောက်မှ သိတယ်။ စသိတာက ဘုရားအလှူရှင်က ဘုရားရေသွန်းဖို့လာတဲ့အ ချိန်မှ စသိတာ။ ဒီဘုရားဆင်းတုတွေက လှူထားတာ နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကတော့ စေတီတော်က အလှူခံပုံး နှစ်ခါပျောက်ဖူးတယ်” ဟု အနောက် ရွှေဘုံသာဖောင်တော်သီ (မောလဲ) စေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးအောင်စိုးက ပြောကြားသည်။
ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် ဘုရားဆင်းတုတော်များကို မူလပူဇော်ထားသည့်နေရာတွင် ယမန်နေ့က တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း နံနက်ပိုင်းတွင် ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဆင်းတုတော်များမှာ ပလ္လင်အပါအ၀င် ဥာဏ်တော် ၁၈ လက်မခန့်ရှိပြီး စကျင်ကျောက်သားဖြင့် ထုလုပ်ထားကာ တစ်ဆူလျှင် တန်ဖိုးကျပ် ၁၁၀၀၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း၊ ဆင်းတုတော်နှင့် အတူပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် မီးစကြာများမှာ လည်းတစ်ခုလျှင် ကျပ် ၂၀၀၀၀ ကျော်ခန့် တန်ဖိုးရှိကြောင်း သိရသည်။
“ညတုန်းကတော့ ဘုရားမီးကို ည ၉ နာရီခွဲလောက်မှာပိတ်ပြီး ၁၀ နာရီကျော်လောက် မှ အိပ်ခဲ့တယ်။ ဘုရားမီးတွေပိတ်ထားပေမယ့် ဘေးက မီးတိုင်တွေတော့ ထွန်းထားတယ်။ မနက်ပိုင်းကျတော့လည်း စေတီတော်က မီးတွေပိတ်ပြီး အလုပ်သွားဖို့ ပြန်သွားတာပါ။ ဂေါပကအဖွဲ့က ပြောမှသိခဲ့တယ်။ ညဘက် ဘုရားဝင်းထဲကနေ ၀င်ထွက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ဘုရားဝင်း အနောက်ဘက်မှာနေတဲ့ လူတွေဝင်ထွက်တာရှိလို့ ဘုရားအရှေ့ဘက် ပေါက်ကို မပိတ်ပါဘူး” ဟု စေတီတော်၏ညစောင့်ဖြစ်သူ ကိုမျိုးသန့်က ပြောကြားသည်။
ယင်းစေတီတော်အနောက်ဘက်တွင် ဥဿရံတိုးချဲ့ရပ်ကွက်ရှိပြီး စေတီတော်ဝင်း၏ ညာဘက်ခြမ်းကိုသာ အုတ်တံတိုင်းများ ကာရံထားကာကျန်ရှိသည့်အပိုင်းမှာ ကာရံထားခြင်းမရှိကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် ဆင်းတုတော် များပျောက်ဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နေရာသို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က လာရောက်စစ်ဆေးနေပြီး အမှုဖွင့် လှစ်ကာ ဆင်းတုတော်ခိုးယူသူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ထားဝယ်မြို့ရှိ ဌာနဆိုင်ရာရုံးအချို့နှင့် NLD ရုံးတို့တွင် နိုင်ငံတော်အလံများ ခိုးယူခံရ၍ပျောက်ဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ တရားခံကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged ခိုးမှု, ထားဝယ်, ဘုရားခိုးLeaveaComment on ထားဝယ်မြို့ အနောက်ရွှေဘုံသာ ဖောင်တော်သီ (မောလဲ) စေတီတော်၌ ထိုင်တော်မူ ရုပ်ပွားတော်ခုနစ်ဆူ ပျောက်ဆုံးမှုဖြစ်ပွား
အငှားယာဉ်အသုံးပြု၍ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အ၀တ်အထည်များ လိုက်လံခိုးယူနေသူတစ်ဦးကို ဖမ်းမိ
Posted on February 19, 2018 February 20, 2018 by Eleven Media Group
အငှားယာဉ်အသုံးပြု၍ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း လှည့်လည်ပြီး အ၀တ်အထည်များ လိုက်လံခိုးယူနေသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ မှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် သာယာကုန်းရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သည့် ဒေါ်….သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် ည ၈ နာရီ ခန့်က ၎င်းနေအိမ်ရှေ့တွင် ကျပ် ၇၄ သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ အ၀တ်အထည်မျိုးစုံ ၁၀၇၀ ထည်အား ဟိုက်ဂျက်ယာဉ်၏နောက်ခန်းတွင် သော့ပိတ်ကာထားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ဖေ ဖော်ဝါရီ ၂ ရက် နံနက် ၅ နာရီခွဲခန့်တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ အ၀တ်အထည်များ ပျောက်ဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် ဒေါ်… က မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့မရဲစခန်းသို့ သွားရောက်တိုင်တန်းခဲ့ရာ ရဲစခန်းက (ပ) ၈၅/၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး ခိုးယူသွားသူကို ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆောင်ရွက်ရာ အခင်းဖြစ်ချိန်တွင် အဆိုပါ အနီးဝန်းကျင်၌ GG/—- Mira အမျိုးအစား အငှားယာဉ်တစ်စီးမှာ အကြိမ်များစွာ သွားလာနေသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် စုံစမ်းရာ ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူမှာ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် စိုးရာဇာ (ခ) မိုဟာမက် အဘတ်စ် (၃၂ နှစ်) ဆိုသူဖြစ်သည်ဟု စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ၎င်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် ညပိုင်းတွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် စက်ရုံလမ်းပေါ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ “ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတော့ ဒီအမှုကို သူကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ သူအသုံးပြုခဲ့တဲ့ အငှားယာဉ်ကလည်း တစ်နေ့ကို တစ်သောင်းနဲ့ ငှားထားတာလို့သိရတယ်။ နောက်ဆက်စစ်တဲ့အခါမှာ အဲဒီနည်းတူပဲ ခိုးမှု နောက်ထပ်နှစ်မှုထပ်ပေါ်တယ်” ဟု အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူအား စစ်ဆေးရာ ၎င်းသည် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် သုဓမ္မာလမ်းမကြီးနံဘေးတွင် ရပ်တန့်ထားသည့် ယာဉ်တစ်စီးပေါ်မှ အထည်များအားလည်းကောင်း၊ အဆိုပါလအတွင်း၌ပင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် အလံပြဘုရားလမ်းအနီး၌ ၎င်းယာဉ်အား ငှားရမ်းစီး နင်းသည့် အမျိုးသမီးမှာ ယာဉ်ပေါ်သို့ ဆေးမှုန့်အထုပ်များတင်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျန်ရှိနေသည့်ပစ္စည်းများ ဆက်လက်တင်ဆောင်ရန် သွားရောက်ယူဆောင်နေစဉ် ယာဉ်အား မောင်းနှင်ထွက်ပြေးခဲ့သည်ဟု စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ပေါ်ပေါက်ချက်များအရ ၎င်းခိုးယူသွားသည့်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်သိမ်း ဆည်းနိုင်ခဲ့ကာ သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းအသီးသီးတွင် အမှုများ ရေးဖွင့်ကာ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged ခိုးမှုLeaveaComment on အငှားယာဉ်အသုံးပြု၍ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အ၀တ်အထည်များ လိုက်လံခိုးယူနေသူတစ်ဦးကို ဖမ်းမိ
မန္တလေးမြို့အတွင်း ဆိုင်ကယ်များ တစ်ကိုယ်တော် လှည့်လည်ခိုးယူသူ အမျိုးသားအား ဆိုင်ကယ်၂၄ စီးနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ
ခိုးယူခြင်းခံရသည့် ဆိုင်ကယ်များအား ပြန်လည် သိမ်းဆည်းရမိထားသည်ကို တွေ့ရစဉ်
မန္တလေးမြို့တွင်းရှိ ဆိုင်ကယ်များကို တစ်ဦးတည်း လှည့်လည်ခိုးယူထားသူ အမျိုးသားကို ဆိုင်ကယ် ၂၄ စီးနှင့်အတူ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်က ဖမ်းဆီးထားမိကြောင်း ချမ်းအေးသာစံမြို့မရဲစခန်း အမှတ် (၈) မှ သတင်းရရှိသည်။
မန္တလေးမြို့တွင်း၌ ဆိုင်ကယ် ခိုးယူခံရသည့် ဖြစ်စဉ်များ မကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီး ပျောက်ဆုံးသည့် အမျိုးအစားများလည်း တန်ဖိုးကြီး ထိုင်းဘီးအများစုများ ဖြစ်နေသဖြင့် အမှတ် (၈) ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ စုံစမ်းနေစဉ် အမျိုးသားတစ်ဦးအား မသင်္ကာသဖြင့် စစ်ဆေးရာမှ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဆိုင်ကယ်ပျောက်ဆုံးထားသူ တစ်ဦးက သူ့ဆိုင်ကယ်ကို မန္တလေးဆေးရုံကြီးက ဆိုင်ကယ်အပ်နှံတဲ့ နေရာမှာ တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီး အကြောင်းကြားတာနဲ့ အဲဒီဆိုင်ကယ် လာရွေးမယ့်အချိန်ကို စောင့်နေခဲ့တာ။ လေးငါးရက်ကြာမှ ဆိုင်ကယ်ကို လာရွေးလို့ သူ့ကို စစ်ဆေးလိုက်တဲ့ခါ အိတ်ထဲမှာ သော့တုတွေနဲ့အတူ ဂွတွေရော တွေ့ခဲ့ရတယ်။ စစ်ဆေးချက်အရ အိမ်မှာ ၁၀ စီး သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံတို့၊ ဆေးရုံကြီးတို့၊ သင်ကြားရေးဆေးရုံတို့ စတဲ့ ဆိုင်ကယ် အပ်နှံတဲ့နေရာတွေမှာ လိုက်လံ သိမ်းဆည်းခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၂၄ စီး သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ ဘီးတွေက သိန်း ၂၀ အထက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ထိုင်းဘီးနဲ့ ဂျပန်ဘီးတွေချည်းပါ။ တစ်ဦးတည်း ခိုးယူခဲ့တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု အမှတ်(၈)ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ်ကျော်သူရထွန်းက ပြောကြားသည်။
Honda Schoopy ၁၃ စီး၊ Honda Click ခြောက်စီး၊ CBR တစ်စီး၊ KTM နှစ်စီး၊ DT နှစ်စီး စုစုပေါင်း ၂၄ စီးကို ၎င်း၏ နေအိမ်နှင့်ဆေးရုံ ဆိုင်ကယ်အပ်နှံသည့် နေရာအသီးသီးတွင် ပြန်လည်သိမ်းယူထားပြီး ကျူးလွန်သူ နေသူရိန်(ခ) သူရိန် (၁၉ နှစ်) ကို ခိုးယူခဲ့သည့်မြို့နယ် နေရာအလိုက် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းများတွင် ပုဒ်မ ၃၇၉/၅၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ဆိုင်ကယ်ပျောက်ဆုံးသူများအနေဖြင့် ဆိုင်ကယ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အထောက်အထားများ ယူဆောင်လာကာ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ၈၁ လမ်း၊ ၂၉ လမ်း နှင့် လမ်း ၃၀ ကြားရှိ အမှတ် (၈) ရဲစခန်းတွင် လာရောက်တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးမြို့တွင် ဆိုင်ကယ်ပျောက်ဆုံးမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသလို ဖမ်းဆီးရမိမှုများလည်းရှိပြီး ဆိုင်ကယ်ခိုးယူသူများမှာ လူငယ်အများစုမှ ကျူးလွန်လေ့ရှိကြောင်း၊ ထိုင်းဘီးဆိုင်ကယ် အသစ်တစ်စီးလျှင် ကျပ်သိန်း ၂၀ အထက် တန်ဖိုးရှိရာ လိုင်စင်မဲ့ အသွင်ပြောင်းကာ နယ်မြို့များတွင် ကျပ် ၁၀ သိန်းဝန်းကျင်ခန့်ဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged ခိုးမှု, ဆိုင်ကယ်LeaveaComment on မန္တလေးမြို့အတွင်း ဆိုင်ကယ်များ တစ်ကိုယ်တော် လှည့်လည်ခိုးယူသူ အမျိုးသားအား ဆိုင်ကယ်၂၄ စီးနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ
ဘောလုံးပွဲရှုံးကြွေးဆပ်ရန်အတွက် ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းတစ်ခုမှ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ကျော် ခိုးယူသည့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပါသုံးဦးအား ဖမ်းဆီး
ဘောလုံးပွဲကြွေးဆပ်ရန် ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းတစ်ခုမှ ငွေကျပ် သိန်း ၂၀၀ ကျော် ခိုးယူခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပါ သုံးဦးကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် သတင်းရရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းတစ်ခုတွင် တပ်ဆင်ထားသော စီစီတီဗွီကင်မရာမှာ အရုပ်မပေါ်သဖြင့် လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ ရုံးခန်းအတွင်း တပ်ဆင်ထားသည့် စီစီတီဗွီ ကင်မရာကြိုးများမှာ ပြတ်နေပြီး စီစီတီဗွီကင်မရာတစ်လုံးကို တိပ်ဖြင့် ကပ်ထားသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများက ၀န်ထမ်းများအတွက် လစာပေးရန်ထားသည့် ငွေများအား စစ်ဆေးရာ ကျပ်သိန်း ၁၇၀၀ အနက် ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ကျော် လျော့နည်းပျောက်ဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားခဲ့ပြီး ကျောက်တံတားမြို့မ ရဲစခန်းက (ပ)၄၅၉/၂၀၁၇၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၈၀ ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ ကျူးလွန်သူများအား ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာ စီစီတီဗွီကင်မရာကြိုးများ မပြတ်တောက်မီ တွေ့ရှိရသည့် အခြေအနေများနှင့် မှတ်တမ်းအထောက်အထားများအရ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖြစ်သူ အောင်ကြည်ငြိမ်းဆိုသူအား မသင်္ကာ၍ စစ်ဆေးရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ပြီး ၎င်းနှင့်အတူ သန့်ဇင်ငြိမ်းဆိုသူနှင့် အောင်ဟံသင်းဆို သူတို့မှာလည်း ကျူးလွန်ရာတွင် ပါဝင်သည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက် ညပိုင်းတွင် အောင်ဟံသင်း (၁၇ နှစ်) ကို ၎င်းနေထိုင်သည့် ဒလမြို့နယ် မြို့မအမှတ်(၂)ရပ်ကွက်တွင်လည်းကောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက် နံနက် အစောပိုင်းတွင် သန့်ဇင်ငြိမ်း(၁၇ နှစ်) ကို ဒလမြို့နယ် ကမာကဆစ်သမ္ဗာန်ဆိပ်တွင် လည်းကောင်း အသီးသီး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား စစ်ဆေးရာ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း အောင်ကြည်ငြိမ်းက ရုံးခန်းအတွင်း ကောင်တာဘေးရှိ မှန်တံခါးအတွင်း ချိတ်ဆွဲထားသည့် သော့တွဲနှစ်တွဲကို အခြားဝန်ထမ်းများ မသိအောင် ရယူ၍ သော့ပြင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် သော့အတု ပြုလုပ်ခဲ့ကာ ယူဆောင်လာသည့် သော့တွဲ နှစ်တွဲကို မူလနေရာတွင် ပြန်လည်ချိတ်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“သော့အတု ပြုလုပ်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ကို ခေါ်တယ်။ အောင်ဟံသင်းနဲ့ သန့်ဇင်ငြိမ်းတို့နှစ်ဦးကို။ သူတို့တွေ တိုင်ပင်ပြီး အဲဒီနေ့ ညပိုင်းမှာ ရုံးခန်းကို သော့အတုနဲ့ဖွင့်ပြီး အထဲကိုဝင်တယ်။ စီစီတီဗွီကြိုးတွေကို အရင်ဖြတ်တယ်လို့ သိရတယ်။ ကျူးလွန်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘောလုံးပွဲရှုံးတော့ အကြွေးတွေဆပ်ဖို့ရှိလို့ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ စစ်ဆေးသိရှိရတယ်” ဟု အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ ယင်းနောက် မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာရုံးခန်းအတွင်း စီစီတီဗွီကင်မရာကို တိပ်ဖြင့်ကပ်ခဲ့ကာ အခန်းအတွင်းရှိ ၀န်ထမ်းလစာ ငွေများအနက် ကျပ် ၂၀၄ သိန်းခန့်ကို ယူဆောင်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ခိုးယူသူများထံမှ သက်သေခံပစ္စည်းများအား သိမ်းဆည်းရမိရေး ဆောင်ရွက်ရာ မြန်မာငွေ ကျပ် ၁၂၁ သိန်း၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန် ၂၉ ရွက်၊ အိုင်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့် ဆမ်ဆောင်းဖုန်းတစ်လုံးတို့ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး ကျန်ငွေများကို သုံးစွဲထားသည်ဟု စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in Crime, Headline, NewsTagged ခိုးမှုLeaveaComment on ဘောလုံးပွဲရှုံးကြွေးဆပ်ရန်အတွက် ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းတစ်ခုမှ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ကျော် ခိုးယူသည့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပါသုံးဦးအား ဖမ်းဆီး
အလှူခံပုံးအတွင်းမှ ကျပ် ၃၀၀ ခိုးယူသည်ဟု ဆိုကာ အမှုဖွင့်ခံထားရသည့် ကလေးငယ် သုံးဦး၏ အာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ဆုံးဖြတ်မည်ဟု သိရ
Posted on September 26, 2017 by Eleven Media Group
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၌ အောင်ဗောဓိ ဆုတောင်းပြည့် စေတီတော်တစ်ဆူရှိ အလှူခံပုံးမှ ကျပ် ၃၀၀ ခိုးယူသည်ဟု ဆိုကာ အမှုဖွင့်ခံထားရသည့် ကလေးငယ် သုံးဦး၏ အာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရားစွဲခံရသည့် ကလေးငယ် သုံးဦး၏ မိဘများက အာမခံပေးရန် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်က လျှောက်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ကလေးငယ်တွေရဲ့ မိဘတွေက ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာက အာမခံလျှောက်ထားခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် အာမခံပေး မပေး ဆုံးဖြတ်ဖို့ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်မှာ ပြန်ချိန်းထားပါတယ်”ဟု အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် ညနေ ၄ နာရီခွဲခန့်တွင် ဒဂုံတောင်မြို့နယ် အောင်ဗောဓိ ဆုတောင်းပြည့် စေတီတော်ဝင်းအတွင်းရှိ အစ်မတော် မြနန်းနွယ် အဆောင်ရှိ အလှူခံပုံးနှင့် မဟာမြတ်မုနိ ကျောင်းဆောင်အတွင်းရှိ အလှူခံပုံးတို့အား အသက် ၁၀ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိ ကလေးငယ်သုံးဦးက ဖောက်ယူပြီး ပိုက်ဆံများ ခိုးယူနေသည်ဟုဆိုကာ သတင်းအရ ဂေါပကအဖွဲ့က သွားရောက် ဖမ်းဆီးကြောင်း၊ ထိုသို့ဖမ်းဆီးရာ ဒဂုံတောင်မြို့နယ်နေ ခုနစ်တန်းကျောင်းသား မောင်….(၁၄ နှစ်)၊ ငါးတန်းကျောင်းသား မောင်…. (၁၃ နှစ်) နှင့် သုံးတန်းကျောင်းသား မောင်… (၁၀ နှစ်) တို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ထံတွင် ကျပ် ၃၀၀ အား တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း မှုခင်းမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
ထိုသို့ တိုင်တန်းမှုကြောင့် ဒဂုံတောင်မြို့မရဲစခန်းက ကလေးငယ် သုံးဦးအား (ပ) ၁၇၂၆/ ၂၀၁၇၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၇၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
အမှုဖွင့် ခံခဲ့ရသည့် ကလေးငယ် သုံးဦးအနက် သုံးတန်း တက်နေသည့် ကလေးငယ် နှင့် ငါးတန်း တက်နေသည့် ကလေးငယ်နှစ်ဦး မှာ ညီအစ်ကိုအရင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းက လေးငယ်နှစ်ဦးနှင့် ခုနစ်တန်း တက်နေသည့် ကလေးငယ်တို့မှာ ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲများ တော်စပ်ကြောင်း အဆိုပါကလေးငယ်များ၏ အဒေါ်ဖြစ်သူက ပြောကြားသည်။
ကလေးငယ် သုံးဦးအား စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်ည၌ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ခံဝန်ထိုးခိုင်းကာ ပြန်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ယင်းနေ့တွင်ပင် ကလေးငယ်များကို ရဲစခန်းမှ ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး သန်လျင် လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးကျောင်း၌ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ကလေးငယ်များ၏ အဒေါ်ဖြစ်သူက ပြောကြားသည်။
Posted in Crime, NewsTagged ခိုးမှုLeaveaComment on အလှူခံပုံးအတွင်းမှ ကျပ် ၃၀၀ ခိုးယူသည်ဟု ဆိုကာ အမှုဖွင့်ခံထားရသည့် ကလေးငယ် သုံးဦး၏ အာမခံနှင့် ပတ်သက်၍ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ဆုံးဖြတ်မည်ဟု သိရ